Wholesale Cryogenic midziyo kugadziriswa, Nokuraramisa, zuva Kuongorora - fekitari uye vagadziri | Joisea
Welding Insulating Gasi Bottle
Cryocart naGene Tank Series
Nehelium Dewar Series
Welding Insulated Gas Bottle (175L ~ 210L)
Welding Insulated Gas Bottle (450L ~ 500L)
Gesi Supply Sisitimu
Cryogenic midziyo kugadzira, Nokuraramisa, zuva rokuongorora
Key Mashoko: Cryogenic midziyo kugadziriswa, Nokuraramisa, zuva rokuongorora
Category: Maintenance Service
Description: Pivas zvinhu uye nehurongwa vane risingaenzaniswi mukurumari uye kuvimbika, uye vari rikurumidze uye zvakakunakira kana kugadziridza kana mabasa zvinodiwa. The kambani rinopa pezvitsiga ose welded insulating gasi sepombi, Nokuraramisa ...
Zvigadzirwa Piva uye nehurongwa vane risingaenzaniswi mukurumari uye kuvimbika, uye vari rikurumidze uye zvakakunakira kana kugadziridza kana mabasa zvinodiwa. The kambani rinopa pezvitsiga ose welded insulating gasi sepombi, kuvariritira uye kudzorerwa-siyana okuchengetera matangi, uye anopa nezuva dzigadziridzwe-siyana enyika, mapaipi uye dzimwe mhando cryogenic michina.
The kambani ine vomuzana kirasi Nokuraramisa basa hurongwa inonzi kunyatsoshanda uye unhu pashure-rokutengesa uye kugadzira pashure-sale. Kugadzira zvivako zvedu zvinogona kukurumidza dzifambirane magadzirirwo uye kugadzira muitiro azvino midziyo kusangana dzenyu zvinodiwa kuunza pakugadzira enyu uye nokuchengeta kwako midziyo achimhanya zvakanaka.
Welding kuputira humburumbira kugadzira uye rokuongorora
The kambani Nokuraramisa maviri nzvimbo, rimwe nomoto insulated gasi sepombi mukugadzira muzinda uye imwe Welding kupisa-insulated humburumbira kugadzira centre pamwe 750m2. Both nzvimbo basa vane wevanamakanika pamwe hwokugadzira rutsigiro uye yemhando midziyo nzwisisika. Vanogona vagadzire welded gasi sepombi kupinza kupinda fekitari kunosangana itsva bhodhoro mitemo. Kugadzira yedu tefa basa anogona ukasangana mutengi zvinodiwa!
The boka uye chinokosha rokuongorora akatanga vari inokosha ishamwari uye rinogona kuderedzwa mutengo, yakarongwa uye vakarongeka nekuongororwa basa vatengi. Uye anogona kuumba rimwe-vanorega basa pamwe Nokuraramisa mabasa inopiwa kambani.
Cryogenic mvura tangi Nokuraramisa, yekuedzwa, calibration
In nekambani fekitari nzvimbo, tangi wenyu nenyanzvi uye zvakanaka chirwere uye akagadzira pakutanga, kudzorera tangi kuvandudza. The boka uye Special Inspection Institute vari inokosha ishamwari kuti kwete chete kupa tichizviedza mabasa vatengi, asi anopa calibration basa tangi mavharuvhu.
Home kugadzira uye mabasa
The chekambani ruzivo romumunda wevanamakanika vanogona kubata pasi-panzvimbo kugadziridza uye nazvo, uye anogona kutanga uye tisvike pfupi. Pamusoro-Nzvimbo yedu basa nyanzvi inogona kugadzira zvinenge zvose pamusoro-nzvimbo cryogenic zvokushandisa, ichipa pamusoro-nzvimbo mabasa kusanganisira: nehelium vhinza kuonekwa, Vacuum rokuongorora, kugadzirisa, uye vharafu yokutsiva yokuzvigadzirisa mabasa.
Next: Pressure mudziyo
Mini cryogenic mvura okuchengetera tangi
Mavharuvhu, Fittings, Vacuum muridzo unoridzirwa
Cryocart Series (zvisiri Rakaumbwa)
Address SANJIN Industrial Park, Xinbei Dunhu, Changzhou
For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu kana pricelist, tapota ibva kwatiri uye tichava uchikurukura mumaawa 24.
Electric Vaporizers , Liquid Carbon dioxide, Microbulk Systems , Bulk Argon For Welding , Liquid Nitrogen , Lng Welding Cylinder For Liquid Cryogenic ,